တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဓာတုဗေဒမေးခွန်းတွင် သင်ရိုးပယ်ထားသင်ခန်းစာများထည့်မေးခဲ့၍ ကျောင်းသားများမနစ်နာရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုဆို | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Section » Education » တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဓာတုဗေဒမေးခွန်းတွင် သင်ရိုးပယ်ထားသင်ခန်းစာများထည့်မေးခဲ့၍ ကျောင်းသားများမနစ်နာရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုဆို
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဓာတုဗေဒမေးခွန်းတွင် သင်ရိုးပယ်ထားသင်ခန်းစာများထည့်မေးခဲ့၍ ကျောင်းသားများမနစ်နာရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုဆို
Sun, 2018-03-18 06:30
ဓာတုဗေဒဘာသာရပ် ဖြေဆိုပြီးနောက် ပြန်လည်ထွက်ခွာလာသော ကျောင်းသူအချို့ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ − စိုင်းဇော်)
ယခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲဓာတုဗေဒမေးခွန်းတွင် သင်ရိုးမှပယ်ထားသည့် သင်ခန်း စာများထည့်မေးခဲ့ခြင်းကြောင့် ကျောင်းသားများမနစ်နာစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု အဆင့် မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
၂၀၁၅ကတည်းက ပယ် ဖျက်ခဲ့သည့် သင်ခန်းစာအချို့ကို စာမေးပွဲမေးခွန်းတွင် ထည့်သွင်း မေးမြန်းခဲ့မှုကြောင့်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမနစ်နာစေရေး အ မှတ်ပေါင်းထည့်ပေးရန် တောင်း ဆိုမှုများရှိနေသည်။
‘‘စာစစ်မှူးချုပ်(သက်ဆိုင် ရာ ဘာသာရပ်ပါမောက္ခ(ဌာန မှူး))တွေစုပြီး အစည်းအဝေးတွေ လုပ်နေပါပြီ။ ဒီနှစ်မေးခွန်းနဲ့ပတ် သက်တဲ့ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းတွေ ကို စာစစ်မှူးချုပ်တွေဆွဲမှာဆို တော့ အဲဒီမှာသူတို့အသေးစိတ် လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ မေးခွန်းလွဲ တယ်၊ ပြုတယ်ဆိုရင်တော့ အမှတ်ပေါင်းပေးရတဲ့ သဘောရှိ တယ်။ ကျောင်းသားတွေ မနစ်နာ အောင်တော့ ဆောင်ရွက်ပေးပါ လိမ့်မယ်’’ ဟု အဆိုပါတာဝန်ရှိသူ ကပြောသည်။
ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်မေး ခွန်းနံပါတ် 1(f) နှင့် 8.(a).(i) တို့ တွင် ယခင်ကဓာတုဗေဒဘာသာ ရပ်ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်အခန်း(၁၃)ပါ သင်ခန်းစာများကို ထည့်မေးထား ရာ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ထိုမေးခွန်းနံပါတ်ကို ရှောင်လွှဲဖြေ ဆိုခဲ့သည်ဟု ဓာတုဗေဒဆရာအ ချို့က ဆိုသည်။
‘‘ဒီပုစ္ဆာကိုဖြေဖို့ နံပါတ်တပ် တဲ့ကလေးလည်းရှိတယ်။ ဒါကို ရှောင်ပြီး တခြားအပုဒ်သွားဖြေလို့ မဖြေလာနိုင်တဲ့ ကလေးလည်းရှိ တယ်။ အဲဒီတော့ ဒါတွေအတွက် အမှတ်ပေးကိုပေးရမယ်’’ ဟု မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဓားသွေး ကျောက်ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်း ကျောင်း CEO ဆရာဓား(ကုန်း ဇောင်း)ကဆိုသည်။
‘‘8.(a) က (ii)ကတွက်စာ၊ ပိုင်တဲ့အပုဒ်လည်း ဖြစ်နေတော့ အပေါ်ကဟာကို မသိပေမယ့် အဲဒါပဲရွေးဖြေခဲ့တာ။ ဆရာမ တွေကတော့ အဲဒီအပုဒ်က ဖြုတ် ထားတဲ့ဟာမို့ အမှတ်ပေးရင် ပေး မယ်လို့တော့ ပြောတယ်’’ ဟု အ ထက(၃)ကြည့်မြင်တိုင်တွင်ဖြေ ဆိုသူမသင်းသင်းနိုင်ကဆိုသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအ ဖြေလွှာများကို တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် အခြေခံပညာအ ထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမများ က စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး အမှတ် ပေးစည်းမျဉ်းပုံစံကို စာစစ်မှူးချုပ် ၁၀ ဦးက ရေးဆွဲသည်။